Raysal Wasaare Rooble " Musharax Xasan Cali Kheyre Iyo Madaxweyne Farmaajo ...
Raysal wasaare Rooble ” Musharax Xasan Cali Kheyre iyo Madaxweyne Farmaajo …
Jimco, Juun, 11, 2021 (Wararka-Maanta) – Raysal Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta ka qeyb galay munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo aheyd mid isaga lagu soo dhaweynaayay oo ka dhacday degmada Deyniile ee gobolka Banaadir.Xaflada lagu soo dhaweynayay Rayal wasaare Rooble waxaa u sameeyay Siyaasiyiinta, Odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Deyniile.
Xubnahii kala duwana ee xaflad ka hadlay ayaa dhamaantood sheegay iney bogaadinayaan shaqada wanaagsan ee uu qabtay Raysal wasaare Rooble sida inuu ka shaqeeyay xasiloonida Caasimada iyo inuu dalka u dhaqaaqo doorasho xor iyo xalaal ah.
Wararka Maanta : Tottenham Hotspur Oo Qarka U Saaran Inay Dhameystirto Magacaabista Antonio...
Raysal wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo ka hadlayay xaflada soo dhaweyntiisa ee Deyniile loogu sameeyay ayaa sheegay inuu ka shaqeyn doono sidii uu dalka u gaarsiin lahaa doorasho ku saleysan cadaalad iney qabsoonto.
“Aniga dhankeyga ka Raysal wasaare ahaan waxaan ka shaqeyn doona doorasho cadaalad ah, waxaan tusaale usoo qaadanayaa hadii aay tartamaan Raysal wasaarahii hore Xasan Cali Kheyre oo musharax ah iyo madaxweyne Farmaajo iney ii siman yihiin” ayuu yiri Raysal Wasaare Rooble.
Wararka Maanta : Korneel Cali Xaanshi " Howlgalada gobolka Sh/dhexe waxaan ku dilnay 30 ka...
Raysal wasaare Rooble ayaa sidoo kale sheegay inuu ku faraxsan yahay soo dhaweynta aay u sameyeen bulshada ku dhaqan degmada Deyniile isagoona uga mahadceliyay qeybaha kala duwan ee kasoo shaqeeyay soo dhaweynta loo sameeyay.
Related Topics:Featuredhttps://Wararka-Maanta.netWararka Maanta
Daawo: Sanbaloolshe oo shaaciyey inuu isbeddelay fikirkii uu ka haystay…
Xisbiga UCID oo ka tanaasulay loolanka doorashada mayor ka caasimada…
Guddoomiyihii hore ee gobolka Gedo oo ‘lagu xayiray’ Muqdisho + Sababt…
Guddiga la dagaalanka musuq maasuqa oo sheegay inuu la dagaalamidoono musuq…
QM oo sheegtay in Soomaaliya ku kordheen tacadiyada ka dhanka ah…
Dhaawaca Saneey Cabdulle oo dibadda loo qaaday – Xog – Wararka Maanta…
Wasiirka Arrimaha Dibedda oo ballan-qaaday runta kiiska dhallinyarada …
Hay’ada caafimaadka aduunka oo qalab caafimaad ku wareejisay Somaliland
Muqdsho (Wararka Maanta) – Guddoomiyihii hore ee maamulka gobolka Gedo Cismaan Nuux Xaaji (Macalimu) oo war qoraal ah soo saaray ayaa shaaciyey inuu ku xayiran yahay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, isaga oo baaq u diray ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble.
Macalimu ayaa sheegay in mas’uuliyiin ka tirsan hay’adda NISA ay ka dambeeyaan xayiraadiisa, isla-markaana laga hor istaagay inuu aado gobolka Gedo iyo qoyskiisa.
“Waxaa nasiib daro ah anigoo ah masuul heer Jubaland ah oo shaqo fiican lasoo qabtay dowladda, kusoo dhaweeyay gobolka ciidanka dowlada, lasoo halgamay usoo dakanoobay haykalka dowladnimo oo aan mucaarad ku ahayn nidaamka Nabad iyo Nolol in la ii ogolaan waayo in aan booqdo deegaankaygii, caruurtaydii iyo gurigii aan ku dhashay. Sababtana ma aqaan, balse kaliya waxaan ogahay inay ka dambeeyaan foolxumadaan madaxda hayada NISA,” ayuu yiri guddoomiyihii ee maamulka gobolka Gedo.
Cismaan Nuux Xaaji ayaa xusay in tani ay muujineyso in amniga dalka aan si sax ah loogu wareejin ra’iisul wasaaraha, taasina ay beenowday, sida uu hadalka u dhigay.
Wararka Maanta : Ra'iisul wasaare Rooble oo magacaabay guddi kale oo doorasho + Ujeedka -...
“Dalku wuxuu galay jawi doorasho, waxaana Madaxwayne Farmaajo uu masuuliyadii nabadgalyada iyo doorashada gacanta u galiyay Raysalwasaare Rooble, balse waxaa muuqata in taasi ay beenowday oo amni la wareejiyay aysan jirin. Sababtoo ah waxaa jira dhibaato xoogan oo hayada NISA ku hayso masuuliyiintii kasoo jeeday Gobolka Gedo,”.
Ugu dambeyn wuxuu baaq u diray Ra’iisul wasaare Rooble, isaga oo ka dalbaday inuu guddi gaar ah u xil-saaro dhibaato uu sheegay inay ka jirto garoonka Aadan Cadde, taas oo lagu hayo mas’uuliyiinta Gedo, xildhibaanada iyo sidoo kale Senatorada kasoo jeeda gobolkaasi.
FARIIN KU SOCOTO XAFIISKA RW ROOBLE
Ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogan gaar ahaan shacabka Jubaland waxaan u rajaynayaa guul barwaaqo, nabad midnimo iyo dooraaho xor ah.
Wararka Maanta : Farmaajo oo war kasoo saaray dib u doorashada Antonio Guterres - Caasi...
Waxaan ka tacsiyaynayaa dhibaatada ciidanka Kenya ay ku hayaan shacabka Gedo iyo Soomaalida ku sugan Nayroobi oo ay u dambaysay dilal qorshaysan iyo qafaalashada dad shacab u badan, kenya ha ogaato in Soomaali tashan doonto oo iska caabin doonto gardaradooda haddii aysan joojin. Looma dulqaadan karo xasuuqooda, aduunkiina waa ka aamusay.
Dalku wuxuu galay jawi doorasho, waxaana Madaxwayne Farmaajo uu masuuliyadii nabadgalyada iyo doorashada gacanta u galiyay Raysalwasaare Rooble, balse waxaa muuqata in taasi ay beenowday oo amni la wareejiyay aysan jirin. Sababtoo ah waxaa jira dhibaato xoogan oo hayada NISA ku hayso masuuliyiintii kasoo jeeday Gobolka Gedo, sida Xildhibaanada, Saraakiisha, Wariyaasha, Odoyaasha dhaqanka iyo cid kasta oo rabta inay ka dhoofto garoonka aadan cade oo u socota gobolka gedo.
Waxaa nasiib daro ah anigoo ah masuul heer jubaland ah oo shaqo fiican lasoo qabtay dowladda, kusoo dhaweeyay gobolka ciidanka dowlada, lasoo halgamay usoo dakanoobay haykalka dowladnimo oo aan mucaarad ku ahayn nidaamka Nabad iyo Nolol in la ii ogolaan waayo in aan booqdo deegaankaygii, caruurtaydii iyo gurigii aan ku dhashay. Sababtana ma aqaan, balse kaliya waxaan ogahay inay ka dambeeyaan foolxumadaan madaxda hayada NISA.
Wararka Maanta : Al-Shabaab oo shaacisay inay dib ula wareegtay deegaano ku yaalla Sh/Dhexe...
BAAQ = RW ROOBLE waxaan ugu baaqayaa in uu guddi baara u saaro dhibaatada garoonka Aadan Cade ay ka wado hayada NISA ee lagu dhibaataynayo waxgaradka iyo siyaasiyiinta jubaland ee gobolka Gedo kasoo jeeda.
Sidee garbahaaray doorasho uga dhici kartaa iyadoo aan laga dhoofi karin garoonka aadan cade ? Yaa masuul ka ah amniga dalka ? Gedo soo dalka la wareejiyay amnigiisa kama mid ahan ? Ma Raysalwasaare Rooble baa amniga dalka masuul ka ah ? Mise Cabdulahi Kulane ?
Jawaab baan ka rabaa xafiiska pm Rooble. Waxaana bixin doonaa waraysiyo dheeraad ah iyo macluumaad dherraad ah oo aan saxaafada la wadaagi doono maalmaha soo socda insha allah.
Talaado, Juun, 22, 2021 (Wararka-Maanta) – Guddiga madaxa-bannaan ee la-dagaalanka musuq maasuqa ayaa soo saaray war-saxaafadeed digniin ah oo uu ku caddeynayo awoodiisa iyo kaalinta uga aadan hanaanka loo qabanayo doorashoyinka dalka.Guddiga ayaa balan qaaday inuu adkeyn doono kaalintiisa ku aadan xaqiijinta inay dalka ka dhacdo doorasho daahfuran, caddaalad ah oo dimuqraadiyad ku saleysan iyo inuu kormeero maalgalinta iyo kharashaadka siyaasadeed, kana hortago ku tagri falka hantida qaranka xilliga doorashooyinka.
Wararka Maanta : Mareykanka oo ciidamo la dagaalamo Al-Shabaab usoo diraya Kenya -...
Guddiga ayaa intaas ku sii daray inuu si dhow ula socon doono ficillada Guddiyada Doorashooyinka, ergooyinka iyo musharrixiinta si looga hortago nooc kasta oo khaladaad doorasho ah.
Muqdisho (Wararka Maanta) – Xubno kamid ah ehellada Korneel Saneey Cabdulle oo kamid ah saraakiishii ku dhaawacantay qaraxii Jimcihii ka dhacay degaanka Biya-cadde ayaa noo xaqiijiyay in Korneel loo qaaday dalka dibadiisa.
Xogta aan helnay ayaa sheegeysa in Korneelka galabkii Axadda loo qaaday dalka Turkiga, waxaana qaaditaankiisa iska kaashaday xubno kamid ah ehelkiisa, saraakiil iyo mas’uuliyiin ay xigto dhow yihiin oo ku jira dowladda Soomaaliya.
Wararka ayaa intaas ku daraya in Korneelka oo dhaawiciisa loo arkay in uu fududyahay uu wajiga ka bararay 48-kii saac ee ugu dambeeyay, waxaana la sheegay in la isku raacay in dibadda loo qaado.
Tan iyo markii uu dhaawacmay waxaa jiray dedaalo xoog leh oo ay wadeen mas’uuliyiin ka tirsan dowladda oo ay ku dalbanayeen in la geeyo Isbitaallada Muqdisho midkood, halka ehelladana ay diidanaayeen, waxaana la tacaalayay dhaqaatiir loogu keenay gurigiisa oo ku yaalla degmada Kaaraan ee Muqdisho.
Wararka Maanta : Puntland oo xayiraadii ka qaaday lacagaha dabaneysan ee sintiyada dollarka
Dhaawaca Korneel Saneey Cabdulle ayaa uur ku taallo ku noqday xubnaha Mucaaradka oo u arkayay awoodda ugu weyn oo ay heestaan markii loo eego dagaalladii ay la galeen Farmaajo bishii April ee sanadkan, ee lagu diiday muddo kororsigiisa.
Waxaa ilaa hadda jira su’aalo badan oo ku geedaaman weerarkii lagu qaaday xeradii uu ku sugnaa ee degaanka Biya-Cadde, ayada oo farta lagu fiiqay ciidanka Gor Gor ee ka amar qaata Farmaajo.
“Qaraxii Ismiidaaminta ahaa ee nagula soo weeraray waxaa lala soo dhaafay xero kale oo ay daganyihiin ciidamada Gor Gor iyagana gaariga ma qaban, ma rasaaseynin, gaarigana iyaga kuma leexan waana aagg aysan gaadiidku marin arrintaas shaki weyn ayey nagu abuurtay,” ayuu yiri sarkaal ka tirsan ciidankii gadoodka sameeyay ee ka tirsanaa 27-aad ee milateriga Soomaaliya.
“Gor Gor dhamaantood waxay diideen in ay xero kula noolaadaan ciidankeena, wax nala cunaan, nala dagaal galaan, arrintaas shaki ayaa ka qabnay haddana gaariga waa soo dhaafyay waxay arrintaan u baahan tahay in la hubiyo,” ayuu hadalkiisa sii raaciyay sarkaal ka tirsan qeybta 27-aad ee xoogga dalka, oo ahaa ciidankii gadoodka sameeyay ee ka hor-yimid muddo kororsiga Farmaajo.
Wararka Maanta : Xog: Sababta ay maamullada qaar usoo magacaabi la'yihiin guddiyada...
Muqdisho (Wararka Maanta) – Wasiirka Arrimaha Debadda Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud ayaa ka hadlay askarta Soomaaliyeed ee tababarka loogu qaaday dalka Eritrea iyo waxa ka jira in ciidamadaas ay ka qeyb galeyn dagaalkii ay Dowladda Itoobiya ku qaaday Gobolka Tigreyga.
Wasiirka oo ka qeybgalayey barnaamijka One-on-One ee telefishinka Turkiga ee TRT World ayaa beeniyey in ciidamada Soomaaliya ay ka dagaalameen waqooyiga Itoobiya.
Wasiir Cabdirisaaq ayaa sheegay in natiijada saxda ah ee ciidamada tababarka ugu maqan dalka Eritrea laga sugayo guddiga uu dhawaan magacaabay Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble.
Wararka Maanta : Mucaaradka oo sheegay sida ay u arkaan liiska guddiyada ee uu shaaciye...
“Marin-habaabino badan way jiraan. Qaddiyadaan waanu kaga hadalnay madalo kala duwan. Si loo xaqiijiyo tani, ra’iisul wasaaraha wuxuu magacaabay guddi ka kooban milatari iyo diblumaasiyiin si ay u eegaan dhacdadan ayna runta u soo bandhigaan shacabka Soomaaliyeed,” ayuu yiri Wasiir Cabdirisaaq.
Walaaca laga qabo askarta dalka Eritrea loogu qaaday tababarka ciidan ayaa cirka isku sii shareeray markii guddiga u qaabilsan Qaramada Midoobay dhanka Xuquuqul insaanka ay sheegeyn in ciidamada Soomaalida ah ay ka qeyb galeyn dagaalkii ay Dowladda Itoobiya ku qaaday Gobolka Tigrayga.
Waalidiinta ilmaha maqan ayaa dhowr jeer dibad baxyo waaweyn ka dhigay jidadka Magaalada Muqdisho, waxayna madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka codsadeen inuu ilmahooda usoo celiyo, inkastoo madaxweyne Farmaajo uusan codsiga iyo illinta waalidiinta marnaba u damqan.
Dhanka kale, intii wareysiga uu socday, Cabdirisaaq oo wax laga waydiiyey xiriirka xumaadey Soomaaliya kala dhaxeeya Kenya ayaa tibaaxay in isu-soo-dhowaanshiyihii u dambeeyay ay astaan u tahay in hogaanka labada dal ay bog cusub furayaan.
“Waxa aan hadda rajeynayno waa in aan sii wanaajiyo xiriirkeena kana wadahadalno amniga, ganacsiga, isu-socodka labada shacab; labadan dal waa kuwa waligood sii ahaan doona deris mana sii yeelan karno xiriir aan shaqaynayn. Qadiyadaha aan rabno in aan kawada hadalno waa in aan u wajahnaa si dhab ah,” ayuu yiri.
Isniin, Juun, 21, 2021 (Wararka-Maanta)- Hay’ada caafimaadka aduunka ee WHO, ayaa dawooyinka lagaga hortago iyo kuwa lagu daweeyo xanuunka Shubanka ku wareejiyay Somaliland.Qalabkan ayaa ka loogu talo galay in lagulan tacaalo xanuunka Shubanka oo ka dilaacay qaybo kamida Somaliland.
“Sidad wada ogsoontihiin waxa soo kordhayay xaalado dhinaca shuban ka ah, oo gobolada oodhan laga soo sheegayo” sida waxa yidhi agaasimaha caafimadka Somaliland Maxamed Cabdi Xergeeye.
“Waxanu hada la wareegayna 910 kartoon, oo midkasta 10 litir ku jiraan” ayuu hadalkiisa ku daray agaasime Xergeeye.
Qalabkan caafimaad ayaa ka kooban dawooyinka lagaga hortago in bukaanku fuuq baxo xiliga shubanka iyo kuwa lagu daweeyo shubanka kadib.
Abdilahi Abdi Rahman,
DANAB oo Shabaab badan ku dishay weerar ka dhacay Sh/Dhexe – Caasimada…
Jowhar (Wararka Maanta)-Saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo ay sacadihii lasoo dhaafay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe, iyagoo shaaciyey tirada dagaalamayaal ay ka dileen kooxda Al-Shabaab.
Taliyaha Guutada 16-aad ee ciidanka kumaandooska Danab Dhamme Xasan Maxamed Cismaan oo howlgalkaas hoggaaminayey ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in Al-Shabaab ay ku weerareen deegaanada kala ah Saabuun, Baaroow, Madiina-Cadde, Gaaleef iyo Buurdheer oo dhamaantood ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe.
Wararka Maanta : Cabdullaahi Xayir oo loo magacaabay Agaasimaha Guud ee Warfaafinta
Taliyaha ayaa sheegay in howlgalladaas ay ku dileen ugu yaraan 8-xubnood oo ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab, kuwaas oo mid ka mid ah la toogtay isaga oo miino ku aasaya wado aad loo isticmaalo, sida uu sheegay Taliye Xasan Tuure.
Sidoo kale waxa uu sheegay inay ciidamadu burburiyeen saldhigyo muhiim u ahaa kooxda oo ay kasoo abaabuli jireen weerarrada ay ka fuliyaan deegaanada qaar ee gobolka Shabeellada Dhexe.
Ururka 7-aad, Guutada 16-aad ee ciidanka kumaandooska Danab ayaa fuliyey howlgalkaas, waxuuna sarkaalkan hoggaaminayey ciidanka sheegay in qorshahooda uu ahaa ka hor-tagga weerarro ay qorsheynayeen Al-Shabaab, isla markaana ay ku guuleysteen.
Wararka Maanta : Gabar 14 jir ah oo kufsi wadareed loogu geystay deegaanka Ceelasha Biyaha
Mudooyinkii u dambeeyey deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe waxaa ka bilaawday howlgallo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab, waxayna militeriga Soomaaliya ku guuleysteen inay ka saaraan deegaano dhowr ah oo ay horay u maamuli jireen.
Wararka Somali33 mins ago
Wararka Somali1 hour ago
Warka Caalamka1 hour ago
Wararka Somali4 hours ago
Wararka Videos13 hours ago
Deg Deg: RW Rooble oo Md Farmaajo u gacan geliyay Gedo, A.Madoobe oo ka…
Caalamka Videos13 hours ago
Soomaaliya oo taariikh cusub ka soo hoysay Itoobiya & Kalluunka Qaadka lagu…
Deg Deg: MD Farmaajo oo qaaday talaabo ka farxisay Militeriga & Go’aanka…
Wararka Videos23 hours ago
Deg Deg: Kenya oo Quusatay & Codsi ay u dirtay DF, Go’aanka MD Farmaajo &…
Caalamka Videos2 days ago
Soomaaliya oo Gelaysa Doorashada Mabaadi & Qabiil Ah Hab Casri Ah | maxaa…
RW Suudaan oo Ka Digay In Dalkiisu Lugaha La Galo Dagaal Sokeeye
Madaxweynaha Puntland oo ku baaqay in ilaaliyo fulinta hehsiiska doorashada…
Alshabaab oo sheegtay masuuliyadda weerar ismiidaamin ah oo lagu dilay…
Shacab Careysan oo banaanbax ka hordhigay Safaaradda Kenya ku leedahay…
Shil ka dhacay duleedka galbeed ee Haragaysa oo sababay dhimasho iyo…
Afar arrin oo tiirar u ah dib usoo laabashada xiriirka Soomaaliya iyo …
Rooble oo ballan-qaaday daryeelka dhalinyaradii ku dhaawacantay qaraxi…
Dhalinyaradii hoggaamineysay banaanbixii maanta oo xabsiga la dhigay -…